Ndingaitei Kana Ndichirwara?—Chikamu 1 | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Unozivawo here mumwe wechiduku ane chirwere chinomutambudza chaizvo? Une chirwere kana kuti urema hunokutadzisa kuita zvimwe zvinhu zviri kuitwa nevezera rako here?
Kana uine dambudziko rakadaro zviri pachena kuti pane dzimwe nguva unombonzwa wakaora mwoyo. Asi pane pfungwa mbiri dziri muBhaibheri dzinogona kukunyaradza.
Musiki wako, Jehovha Mwari, anoziva dambudziko rako. Uye chimwe chinonyanya kukosha ndechokuti, ‘ane hanya newe.’—1 Petro 5:7.
Jehovha Mwari ane chinangwa chokubvisa zvirwere zvose! Unogona kuverenga nezvazvo muBhaibheri pana Isaya 33:24 uye Zvakazarurwa 21:1-4.
Vechiduku vakawanda vane matambudziko ourwere vakaona kuti kutenda muna Mwari uye muvimbiso dzake kunoita kuti vasanyanya kunetseka. Ona mienzaniso mina.
Ndakatanga kushandisa wiricheya pandakanga ndava nemakore 11. Handikwanisi kuita mabasa ari nyore akadai sokusimudza zvinhu zvisingamboremi.
Pandaiva nemakore 5, ndakabatwa nechirwere chinotadzisa tsandanyama kushanda zvakanaka chinonzi muscular dystrophy, chinoita kuti nditadze kuita zvimwe zvinhu. Dzimwe nguva ndinomboora mwoyo nokuti ndinotadza kuita zvinhu zvinoitwa nevezera rangu. Asi vabereki vangu nevandinonamata navo vanondibatsira pakuita zvimwe zvinhu, vanondinyaradza, uye vanonditsigira pazvinhu zvokunamata. Ndinopedza nguva yakawanda ndichiparidzira vanhu, uye vamwe vandinonamata navo vanondiperekedza kunodzidzisa vanhu Bhaibheri.
Jesu akati zuva rimwe nerimwe rine nhamo yaro. (Mateu 6:34) Saka ndinoedza kusazvinetsa nokufunga kuti chii chichaitika mangwana uye ndinozvipa basa randinokwanisa kuita. Ndinotarisira kuzorarama munyika itsva yaMwari umo mandichange ndava ‘neupenyu chaihwo,’ ndisisina chirwere ichi chiri kunditambudza.—1 Timoti 6:19.
Zvokufunga nezvazvo: Yeimy anoona zvichibatsira kuzvipa basa raanokwanisa kuita. Unogona kutevedzerawo sei izvi?—1 VaKorinde 9:26.
Musana wangu wakatanga kurwadza pandakanga ndava nemakore 6, uye pakutanga vanachiremba vaingoti zvinhu zvinoitika kana munhu achikura. Asi papera gore, vakaona kuti ndaiva nebundu mumuzongoza (spine) wangu.
Ndakavhiyiwa, asi chiremba wacho haana kukwanisa kubvisa bundu racho rose. Pashure pemwedzi miviri chete, bundu racho rakakura rikabva raenzana nezvarakanga rakaita risati rachekwa! Kubvira ipapo ndakanga ndava kungopinda ndichibuda muchipatara, ndichipiwa mishonga yakasiyana-siyana, uye izvi zvaindiodza mwoyo kakawanda.
Dzimwe nguva bundu racho rinondirwadza kuita senge ndiri kubayiwa-bayiwa muviri wose nebanga, asi kunyanya kumusana nepachipfuva. Kunyange zvakadaro handinyanyi kubva ndaisa pfungwa dzangu padambudziko iri. Ndinozviyeuchidza kuti vamwe vari kutsungirirawo matambudziko akatokurisisa, asi havabvi vanyanya kuzvidya mwoyo. Chinhu chikuru chinondibatsira kuti ndisanyanya kuzvidya mwoyo chivimbo chandiinacho chokuti rimwe zuva Jehovha Mwari achazadzisa vimbiso yake yokubvisa matambudziko ose.—Zvakazarurwa 21:4.
Zvokufunga nezvazvo: Kufunga nezvevimbiso yaMwari yokubvisa matambudziko ose kunogona kukubatsira sei kutsungirira, sezvakaitwa naMatteo?—Isaya 65:17.
Uchinditarisa hazvimboratidzi kuti ndinorwara, saka vamwe vanhu vanobva vafunga kuti ndine nungo. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvose zvinondiomera kuita, kusanganisira mabasa epamba, kuverenga, kunyange kumuka.
Pandaiva nemakore 16, ndakabatwa nechirwere chakaipisisa chinonzi multiple sclerosis, icho chinondikanganisa pakuita basa uye pakuita mabasa echiKristu. Ndaigara ndichiverenga rugwaro rwa1 Petro 5:7, urwo rwunoti: ‘Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose pana Mwari, nokuti iye ane hanya newe.’ Kuziva kuti Jehovha ane hanya nesu semunhu mumwe nemumwe kwaibva kwandisimbisa. Izvozvo zvichiri kundisimbisa nanhasi.
Zvokufunga nezvazvo: Unobatsirwa sei kana ukaudza Jehovha zvose zviri kukunetsa, sezvakaitwa naBruna?—Pisarema 55:22.
Vamwe vanhu vanondibata sekamwana kane makore 10. Handivapi hangu mhosva nokuti uchinditarisawo ndinoita senge kamwana.
Pandaiva nemakore maviri, ndakabatwa nekenza isingawanzobati vanhu iyo yakatangira mumuzongoza uye ikazoenda muuropi. Vanachiremba vakakwanisa kuita kuti isaramba ichipararira, asi kurapwa kwacho kwakabva kwakakanganisa makuriro angu. Parizvino, ndakareba mamita 1,37. Vanhu vakawanda vanofunga kuti ndinenge ndichivanyepera pandinovaudza kuti ndine makore 18!
Vandinonamata navo vanondibata semunhu mukuru. Havandibati sekamwana kaduku, sezvandinoitwa ndiri kuchikoro. Ndinoedza kusanyanya kuzvidya mwoyo nezvedambudziko rangu. Chinhu chinonyanya kukosha muupenyu hwemunhu, ndiko kuziva Jehovha kwandakaita! Pakutsungirira kwose kwandichange ndichiita, ndine chokwadi chokuti Jehovha achange aineni. Kufunga nezvenyika itsva yakanaka iyo Jehovha akavimbisa kunoita kuti ndisanyanya kuzvidya mwoyo.—Isaya 33:24.
Zvokufunga nezvazvo: Sei André akati “chinhu chinonyanya kukosha muupenyu hwemunhu” kuziva Mwari?—Johani 17:3.
Utano Vechidiki Vanobvunza Kuti Vari Kuyaruka
Bhaibheri rinoti Mwari anoda vanhu uye haadi kuti vaitirwe zvakaipa. Kuziva izvi kungakubatsira sei?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaitei Kana Ndichirwara?—Chikamu 1
ijwyp nyaya 13